Ewe singumvelisi womatshini wokutya oyile ngaphezulu kweminyaka eli-14.
2. Ungayikhetha njani eyiyo?
Nceda usithumelele iimfuno zakho ezineenkcukacha nge-imeyile okanye kwi-intanethi, kwaye siya kuncoma iimveliso ezifanelekileyo ngokweemfuno zakho.
3. Unabo oomatshini esitokhweni?
Hayi, umatshini wethu uveliswa ngokwesicelo sakho.
4. Ndingayihlawula njani?
A: Samkela intlawulo eninzi, njenge-T / T, i-Western Union, i-L / C ...
5. Ngaba iyakusilela kuthutho?
A: Nceda ungakhathazeki. Iimpahla zethu zipakishwe ngokungqongqo ngokwemigangatho yokuthumela kwelinye ilizwe.
6. Ngaba unikezela ngofakelo lwaphesheya?
Siya kuthumela injineli yobungcali ukukunceda ufake oomatshini beoyile, kunye nokuqeqesha abasebenzi bakho ngokukhululekileyo.
I-USD80-100 ngomntu ngosuku, ukutya, indawo yokuhlala kunye netikiti zomoya ziya kuba kubathengi.
7. Ndingenza ntoni xa ezinye iindawo zaphukile?
A: Nceda ungakhathazeki, oomatshini abohlukeneyo, sinezinto ezigugileyo iinyanga ezi-6 okanye ezili-12 iwaranti, kodwa sifuna abathengi ukuba bathwale iindleko zokuhambisa. Unokuthenga kuthi emva kweenyanga ezi-6 okanye ezili-12.
8. Yintoni isivuno seoyile?
Isivuno seoyile sixhomekeke kwimixholo yeoyile yezinto zakho.Ukuba umxholo weoyile yezinto zakho uphezulu, unokufumana ioyile ebaluleke ngakumbi. Ngokubanzi, intsalela yeoyile yeScrew Oil Press yi-6-8%. intsalela yeoyile yokuCandwa kweSolvent yi-1%
9.Ngaba ndingawusebenzisa umatshini ukukhupha iintlobo ezininzi zezinto ezisetyenzisiweyo?
Ewe kunjalo. ezinjengeesame, iimbewu zikajongilanga, iisoyi, ipeanunt, ikhokhonathi, njl
10. Uthini umbandela wakho kumatshini wakho?
Intsimbi yeCarbon okanye i-Stainless yentsimbi (Uhlobo oluqhelekileyo ngu-SUS304, inokwenziwa ngokwezifiso ngokwesicelo sakho)
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Zonke iiMveliso Umthengisi weoyile, Umatshini wokushicilela ioyile, Umatshini wokushicilela weoyile encinci, Ingqele Cofa Umatshini weoyile, Imithombo yeendaba yeoyile yeOlive, Imbewu yeNtengiso yeoyile,